Aruba’s Online ED Card mitigating crisis concerns on the island | Aruba travel news
Ikhaya » izithuba » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zokuhamba zeAruba » Ikhadi le-ED lase-Aruba elikwi-Intanethi elithomalalisayo ukuxhalaba kwesi siqithi
Iindaba zokuhamba zeAruba • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Imicimbi kaRhulumente • Iindaba zeShishini lokuBuka iindwendwe • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • omnye • ukwakha uhambo kwakhona • Iindaba ezijongene noKhenketho • Iindaba zoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Itekhnoloji yoKhenketho • Iindaba eziShukumayo
Ikhadi le-ED lase-Aruba elikwi-Intanethi elithomalalisayo ukuxhalaba kwesi siqithi
Oktobha 8, 2020
The Covid-19 Ingxaki ibonisa ukuba ukuzenzekelayo kubaluleke kakhulu ngoku kunakuqala. Ngokuphakanyiswa kwemiqobo emininzi kunye nokuvulwa kwemida kwakhona, ishishini lokuhamba kunye noorhulumente bakulungele ukuphumeza amanyathelo amatsha kunye nemithetho engqongqo ekufuneka ihanjelwe ngabahambi. Ikhadi le-intanethi ye-ED okanye ikhadi lokhenketho sesinye sezixhobo ezisetyenziswa ngoorhulumente abaninzi ukuqokelela ulwazi olubalulekileyo kwangaphambi kwabahambi abangenayo.
Isisombululo seGamma IT, inkampani esekwe kwisoftware ese-Aruban, ngumphuhlisi we Ikhadi le-ED lase-Aruba kwi-Intanethi, Eliplatifomu epheleleyo yokuzifudukela elizenzekelayo. Ikhadi le-Intanethi elikwi-Intanethi lenza ukuba abasemagunyeni abachaphazelekayo base-Aruban baphumeze izihluzo zokuqala kuhlolo lwabaphambi kwexesha ukuya e-Aruba nokwenza ukuba kuvulwe kwakhona imida ye-Aruba.
The Ikhadi le-ED kwi-Intanethi okanye ikhadi lokhenketho eliphuhliswe yiGamma IT Solutions sisixhobo esibalulekileyo kurhulumente walo naliphi na ilizwe elijonge ukuqokelela idatha ebalulekileyo ngaphambi kwabahambi abangenayo. Ngenxa yokuba ilizwe ngalinye limisela amanyathelo okhuseleko, enye yezona zinto zibalaseleyo kwiKhadi le-Intanethi le-Intanethi kukuba iyakwazi ukwenza ngokwezifiso iimfuno kunye nemigaqo-nkqubo yelizwe ngalinye.
Ikhadi le-Intanethi le-ED laseAruba ukuza kuthi ga ngoku likwazile ukuqokelela idatha ebalulekileyo ngokubhekisele kwinkxalabo yezempilo kurhulumente waseAruban onje:
Ukungeniswa kwemibuzo enxulumene nempilo kwiQonga lokuFudukela kwelinye ilizwe njengomgca wokuqala wokhuselo wokwala abahambi abafuna ukutyelela iAruba ezineempawu ezinxulumene ne-COVID;
Ithuba lokufaka uvavanyo olubi lweCorona ngaphakathi kweeyure ezingama-72 ngaphambi kokufika eAruba ukuvumela abahambi abasempilweni ukuba batyelele iAruba;
Ukunikezela ngesisombululo esihlanganisiweyo sokuhlawula ngaphakathi kwiQonga lokuFudukela kwelinye ilizwe esivumela abahamba kwixa elizayo ukuya eAruba ukuba bahlawule i-inshurensi yesinyanzelo yeAruba COVID kunye nokuhlawula kwangaphambili kuvavanyo oluza kwenziwa xa ufika eAruba;
Itshekhi ezenzekelayo kunye nefilitha yabahambi abasuka kumngcipheko ngaphakathi e-USA abafuna ukuba balayishe uvavanyo lwe-PCR olubi ngaphambi kokuba babhabhe baye eAruba;
Itshekhi ezenzekelayo kunye nefilitha yokwala abahambi ababhabha bevela kumazwe apho iAruba ivale imida yayo;
Isisombululo esidibeneyo neSebe lezeMpilo apho iGunya lezoKhenketho lase-Aruba (ATA) lenze ukuba lonke ulwazi olunxulumene nezempilo luqokelelwe liQonga lokuFudukela kwelinye ilizwe kwaye linikezelwe kwisebe lezempilo ukuba livavanye iindwendwe ezizayo ngaphambili.
Izisombululo zeGamma IT, ikwangumphuhlisi weRADEX BCMS, iNkqubo yokuLawulwa kweMida yeAruba, yenze ukuba kube nakho ukudibanisa lonke ulwazi oluqokelelwe kwiKhadi le-Intanethi le-Intanethi kwiziko ledatha leRADEX BCMS. Amagunya karhulumente agunyazisiweyo aya kuba nakho ukujonga idatha kwaye abe nolwazi oluchanekileyo noluchanekileyo ngoku malunga nabahambi abangena nabashiya ilizwe.
NgokweMida yoLawulo lweMida, iKhadi le-ED kwi-Intanethi lenze ukuba kube lula ukwenza iQonga lokuFuduka linyanzeleke kubo bonke abahambi. Oku kushenxisile ukusetyenziswa kwekhadi le-ED elibonakalayo elikhokelela kwangoko:
Akusayi kuphinda kuskenwe amakhadi e-ED ngokwasemzimbeni ngamaGosa okuFudukela kweli anciphisa ixesha lokuqhubekeka kwabahambi ngama-40%;
Iinqwelo-moya akufuneki zithenge amakhadi e-ED ngokwasemzimbeni kwakhona; oku kulunge kakhulu kwindalo;
Idatha ecocekileyo, ephucula umgangatho wonke wedatha yeRADEX BCMS kunye nedatha yokhenketho.
Njenge-Aruba, amazwe amaninzi abeka ezabo iindlela zokukhusela kunye nemigaqo-nkqubo endaweni ukuze baphinde bavule imida yabo. Esinye sezibonelelo ezininzi zokuba nenkqubo yolawulo lwemida njengeRADEX BCMS, kukuba inokudityaniswa nayo nayiphi na iKhadi le-ED kwi-Intanethi kunye / okanye ikhadi lokhenketho lalo naliphi na ilizwe.
Ukuza kuthi ga ngoku, ukuzenzekelayo kwekhadi le-Intanethi le-Intanethi kuzise izibonelelo ezininzi kumagunya ase-Aruba. Ngokuba nedatha ngesandla, ngaphambi kokuba abahambi bafike eAruba, abasemagunyeni banakho ukwenza amalungiselelo angcono ukulungiselela inani labahambi.
Oku kubandakanya amalungiselelo ahambelana:
Ukuqeshwa kwabasebenzi abafudukayo;
Ukuqeshwa kwabasebenzi kwisikhululo seenqwelo-moya;
Ikhadi le-Intanethi le-Intanethi okanye ikhadi lokhenketho linokuba nezibonelelo ezininzi kulo naliphi na ilizwe. Kubaluleke ngokulinganayo ukuba neNkqubo yoLawulo lweMida efana neRADEX BCMS ekhoyo, evumela iinkqubo ukuba zinxibelelane kwaye zinike ulwazi oluxabisekileyo kubo bonke abasemagunyeni abafanelekileyo. I-RADEX BCMS yinkqubo epheleleyo yoLawulo lweMida kunye ne-hard- kunye nesoftware yokuthimba i-biometric yokubamba kunye namandla okukhangela. Iimpawu eziphambili zeRADEX zibandakanya ukuqhubekeka kwenqanaba lokuqala, okubandakanya ukujonga ngokuchasene neenkcukacha zepasipoti ezibiweyo, uluhlu oluninzi olufunwayo, kunye nolunye ugcino lwedatha elinqwenelwa lilizwe; Ukulungiswa kwenqanaba lesibini, elibandakanya ukukhangela kwe-biometric kunye nokubhalisa; ukunika ingxelo ukhuseleko; kunye nolawulo.
Xa la manyathelo mabini (iKhadi le-ED elikwi-Intanethi / iKhadi lezoKhenketho kunye nenkqubo yolawulo lwemida) zidityanisiwe, ziya kukhawulezisa umsebenzi wamaqumrhu amaninzi karhulumente azama ukuqinisekisa ukhuseleko nokhuseleko kungekuphela kwabahambi abangenayo, kodwa ngakumbi abemi babo.